Soo dejisan PeaZip 7.1 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: PeaZip
PeaZip – software ah loo kala, diinta iyo cadaadin files galay kaydka. software The taageertaa qaabab caanka ah ee archives sida 7z, rar, ZIP, ISO, ACE, UPX, iwm PeaZip ay u gaar ah digir format archive, kaas oo taageera riixo mugga iyo waxa uu leeyahay nidaamka encryption tayo sare leh u shaqeeyo. software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan bookmarks ee archives ama fayl iyo raadin by content ee archives oo aan ay ka soo fagid. Sidoo kale PeaZip awood si ay u tijaabiso qaab nidaam in siinaysaa fursad ah in la ogaado xawaaraha isitcmaalo riixo file ah.
Riixo, decompression iyo diinta ee archives
Search by content ee kaydka
hab tayada sare ee encryption
Soo dejisan PeaZip
Faallo ku saabsan PeaZip
PeaZip Xirfadaha la xiriira